Flash Development! Istanbul Marmaray ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာမှထုတ်ပယ်ခံရသည် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Flash Development! Istanbul Marmaray ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာမှထုတ်ပယ်ခံရသည်
flas ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ istanbul marmaray ခရိုင်မန်နေဂျာ
Flash ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ! Istanbul Marmaray ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာမှထုတ်ပယ်ခံရသည်။ တူရကီ၏သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏လက်မှတ်နှင့်အတူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဝန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်များအရသူဟာ Marmaray ဒေသဆိုင်ရာ Manager ကို Mehmet Ziya Erdem တာဝန်ကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ကတရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေထားပြီးစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုခနျ့အပျဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. တူရကီသမ္မတ, Recep Tayyip အာဒိုဂန်, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာန၏လက်မှတ်နှင့်အတူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဝန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်များအရသိရသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ Marmaray Istanbul ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Mehmet Ziya Erdem ကိုရာထူးမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် flash ကိုဆက်စပ်သောမကြာမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု!
တူရကီအတွက်အမြန်ရထားမတော်တဆအတွက် Flash ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွေ့အကြုံ
BURULAŞမှ General Manager Levent Fidansoy ထုတ်ပယ်